Magacyada naqshadeeyayaasha loogu yeedho Pitti Uomo
Abaabulayaasha bandhigga caanka ah ee Pitti Uomo, oo sanadkan lagu qaban doono Florence laga bilaabo 16 ilaa 19 Juun, sida caadiga ah, qulqulaya martidooda iyo booqdayaashooda iyaga oo aan muujin dhammaan kaararka illaa bilawgii dhacdada. Mararka qaarkood waxay ku soo wargeliyaan qayb ka mid ah macluumaadka ku saabsan barnaamijka, oo diirada saaraya danta dadweynaha. Sidaas darteed, dhowaan magacyada ka qaybgalayaasha barnaamijka gaarka ah ee bandhigga ayaa loo yaqaan.
Marka hore, waa Moschino, oo markii ugu horreysay tan iyo markii loo magacaabay agaasimaha curinta ee shirkadda, Jeremy Scott, wuxuu soo bandhigi doonaa ninkeeda talyaaniga. Abaabulayaasha Pitti Uomo waxay sharaxaad ka bixinayaan xiisahooda ku saabsan abuurista Jeremy ee asalka iyo casriyeynta shaqadiisa.
Marka labaad, naqshadeeynta hawada Canadian Taitman Thomas Tait, oo wax ka barta Dugsiga St. Martins College, wuxuu soo saari doonaa ururinta dumarka ee London, halkaas oo hadda uu abuurayo. Abaabulayaasha bandhigga ayaa sheegay in ururkan loo soo bandhigi doono meelo gaar ah, laakiin waxa jira, inta qarsoodi ah.
Marka saddexaad, markii ugu horeysay ee agaasimaha hal-abuurka ah ee Kilgour Carlo Brandelli uu tusi doono shaqadiisa Talyaaniga.
Ugu dambeyn, booqdayaasha bandhigga ayaa arki doona bandhigida loo qoondeeyay shaqada Nino Cherruti, kuwaas oo ardaydoodu ay leeyihiin couturiers badan oo tayo leh - tusaale ahaan, Giorgio Armani. Martidu waxay arki doonaan waxyaalaha muujiya hal-abuurka, fikradaha iyo qaabka naqshadeeye weyn ee Talyaaniga. Kaaliyaha bandhiggu wuxuu ahaa naftiisa Cherruti, oo hadda 85 sano jir ah.
Internet portal Models.com waxay doorteen qaababka ugu fiican ee 2014
Xilliga xagaaga - dhirta iyo dhalooyinka
Chanel-ga xagaaga ee Saint-Tropez
Brand Missoni waxay soo saari doontaa dharka ilmaha
Kabo tayo sare leh mustaqbalka at Fashion Week ee New York
Muuqaalka muuqaalka Chanel Metiers d'Art waxaa ka mid ah xiddigo badan oo indho indheyn ah
Dharka guriga oo dhaadheer
Maro-jaale ah: sida loo xirto si aad u eegto stylish
Sida loo kala saaro ipk macmal ah laga bilaabo imika
Quesadilla oo leh jiis
Canab leh qoortiisa
Isticmaalidda xoojinta xagga dambe ee madaxa - isbeddel-2016
Qadar-berry: karsaarashada macaanka miro ka sameysan guriga
Anastasia Reshetova waxaa ka xumaaday gabaygii Timati, oo loogu talagalay Alena Shishkova
Saaxiibkaygu wuxuu u maleynayaa in aan dalbado wax badan
Sida loo kordhiyo libido ee haweenka
Qalabka guriga ee jikada - badanaa
Sidee guurka luminayaa gabadhooda?
Jiiska iyo buskudka liinta
Sababaha maskaxeed ee khilaafaadka ee qoyska dhalinyarada ah
Horoscope for December 2017 - dumar-Rabshado - laga bilaabo Tamara Globa iyo Angela Pearl
Daaweynta caloosha joogtada ah ee daawada dadweynaha